BOORKA KORDHA: SIDA LOO FAAFIYO TUBTA ADOO KU DHAJINAYA, GOOYNTA IYO KORITAANKA XIDIDKA - BEERTA
Beeraley kastaa waxay leedahay dhirta uu jecel yahay. Badanaa soo jiidashada ugu weyn iyo darling waxay noqotaa dabacsanaan macaan leh oo koraya beerta.
Plum waa fiicantahay ma aha oo kaliya dhadhankiisa, waxa uu leeyahay waxyaabo badan oo bogsiinaya. Miro badani waxay ku badan tahay magnesium, birta, zinc, fitamiin C, iyo geeddi-socodka koritaanka waxay ku urursatey vitamin B2, kor u qaadidda dheef-shiid kiimikaad. Intaa waxaa dheer, fitamiin B waxay ka ilaalisaa habdhiska dareemayaasha ee ka yimaada dareenka dibadda, ka hortag cadaadiska iyo dhiirigelinta ka saarista walxaha waxyeelada leh jirka.
Waa muhiim! Waxaa jira fiitamiin B2 oo ka badan kan beeraha kale.
Miraha xayawaanka waxay ka kooban yihiin walxaha xoojiya xididdada dhiigga waxayna yareyn karaan cadaadiska, ka saar hilibka xad-dhaafka ah iyo dhiirrigelinta hawlaha habboon ee mindhicirka. Laakiin ma aha oo kaliya miro miraha ayaa bogsiinaya guryaha, laakiin sidoo kale jilif, qoryo, iyo sidoo kale ubax. Geedkani waa mid aan lagama maarmayn karin dacha.
Haddii aad tahay ninkii beerta ka shaqaynayay oo leh khibrad yar, waxaad u maleyneysaa inaad xiiseyneyso su'aasha ah sida loo kobciyo noocyo kala duwan iyo sida xayawaanka loo dhufto. Ka fikir sharciyada asaasiga ah.
Waxaa jira dhowr siyaabood oo faafin ah ee malax: caleemaha xididka, gooyn, grafting ama biqilka dhagax. Laga soo bilaabo abuurka dhif ah koray tubta dalagga. Waxaa loo isticmaalaa oo kaliya wax soo saarka dhirta, si ay u gooyaan xayawaanka ama burooyinkeeda kala duwan ee dhirta kala duwan. Dhirta noocan oo kale ah waxaa lagu magacaabaa kaydka. Si ay u koraan rootstocks, waxaad u baahan doontaa abuur cayriin caafimaad leh. Ku qooji 4 maalmood, beddel biyaha iyo walaaqaya. Ka dib markii la qalajiyo abuurka iyo u wareeji weel kusaabsan kaydinta dheeraadka ah. Ka hor inta beerto, abuurka tubta waa in la dhajiyaa. Si arrintan loo sameeyo, ku dar qaso qoyan ama balka iyo boodhaha lix bilood heerkul ah laga bilaabo +1 ilaa -10 ° C. Seeds waa in la beeraa dhamaadka dayrta ama guga ka dib dhaxan. Sannad ka dib, waxaad yeelan doontaa geedo diyaar u ah kaas oo lagu tallaali karo.
Qalabka saliidda lagu gooyo
Roodhiga waxaa ugu wanaagsan in la gooyo. Tani waa mid ka mid ah siyaabaha ugu kalsoon ee lagu soo saaro geedo caafimaad leh leh miraha dhadhan fiican leh. Si sax ah u gooyn dhirbaaxo, dhowr sano waxaad heli doontaa geedka rooti, ​​miraha dhirta. Ku dhajinta xayawaan ee habkan waa in lagu sameeyaa gooyn lignified iyo cagaaran.
Isku-dhalinta caleemaha caleemaha waxay noqotey mid caan u ah beeralayda dhawaan. Markii hore, habkan waxaa loo isticmaalay oo keliya wax soo saarka. Faa'iidooyinka ugu muhiimsan waa faafinta degdega ah iyo boqolkiiba sare ee gooynta xididdada, taas oo siinaysa korodh wanaagsan oo geedo ah halkii cutub. Gooyn cagaaran si dhakhso ah u koraan badan oo geedo badan oo kala duwan. Laakiin waxaa haboon in la xuso in dhammaan noocyada dhirta tubta si fudud loo rujin karo. Waayo, qaabkani waa tijaabooyin wanaagsan oo horumarinaya tiro badan oo caleemo xidid ah. Cunsurrooyinka sida qalabka, tayada wax soo saarka, Bacriminta, muddooyinka xilliga, iyo xaaladaha dhirta ayaa saameeya natiijada taranta. Kala saarista gooynta lignified waxaa loo tixgeliyaa habka dhirta ugu fudud. Si aad uga soo baxdo boombalool ka soo goynta qoryaha, u diyaargarow xilliga nasashada. Qodobka ugu muhiimsan ee arrintani waa diyaarinta warshadda hooyada - gaaban gaaban sannadkii ka hor goynta. Qalabadan ka dib, caleemaha ayaa ka muuqda geedka, kaas oo ka qaadi kara asaas iyo horumarin madaxbannaan.
Wakhtiyada kama dambaysta ah ee wax soo iibsiga
Aad bay muhiim u tahay in la gooyo guntinta xaalad caafimaad leh ka hor inta aan la tallaalin. Shaybaarka cagaaran waa in laga goostaa marxaladda degdegga ah ee kobaca (bartamihii July), iyo kuwa lignified kuwa, lid ku ah, inta lagu jiro xilliga nasashada.
Haddii dhirta dhirta ay ku koraan aag qaboojiyaha qabooba, gooyo lignified lignified dhamaadka November ama horraantii Disembar, laakiin had iyo jeer ka hor bilawga ah ee dhaxan daran oo ka hooseeya -20 ... -25 ° C.
Haddii jiilaalka ma ahaa mid aad u barafoobay, waxaad diyaarin kartaa gooyn guga hore, ka hor inta aan la bararsan. Xaaladdan oo kale, ma jiri doonto wax dhibaato ah oo ku saabsan kaydinta qalabka beeraha.
Sida loo diyaariyo guntinta tubta
Ka hor inta aan la saarin jirida tubada, waxaa muhiim ah in si wanaagsan loo soo qaato wax soo saarka. Dhexdhexaadiyaha, jarida waa in ay ahaato cabbirka qalin. Haddii ay soo baxdo in ay noqoto mid khafiif ah, way qallaji doontaa ka hor inta ay sii koraan stock leh. Si aad u diyaargareyso jarida waxay qaadataa kobaca sanadlaha ah ee 40-50 cm oo dherer ah. Haddii tubta, oo aad ka goosto in aad gooyo, waa jilicsanaan, ka dibna guga waxaad u baahan doontaa inaad sameysid manjooyin cusub oo lafdhabarta ah.
Heerkulka ugu fiican ee kaydinta guntooda waa 2-4 ° C.
Meelaha uu jiro baraf badan, gooyn ayaa lagu talinayaa in lagu kaydiyo hoos lakabka ah ee baraf ah 50-70 cm sare. Laakiin degaanka ay jiraan inta badan boogaha dhexe ee xilliga qaboobaha, waxaad u baahan tahay inaad buuxiso guntooda leh dhadday qoyan iyo qaado qabow. Ka dib marka dhadku ku qaboojiyo oo samaysto cocoon, u qaado meel aan la helin qorraxda qorraxda waxayna ku rushaysaa lakab 30-40 mitir qoyan oo qalalan. Maadada ayaa si fiican u ilaalisa kulaylka, sidaas darteed gooyn ayaa la barafeynayaa ilaa taariikhda la rabo. Dhowr maalmood oo qalliinka ka hor ah, u wareeji bacda leh gooynta meel diiran, halkaas oo caleemaha mustaqbalka si tartiib ah u dhalaali doonaan.
Haddii aad leedahay dhowr gooyn, waxaad ku hayn kartaa qaboojiyaha. Ku rid bac caag ah, ku duub baqshadda oo ku soo jiid dhar. Ku rid bac kale dhamaadka kale oo isku xir.
Waa muhiim! Kuma talin karno in la dhigo gogolka tubada ee qaboojiyaha - waxay ku qaboojin karaan halkaa.
U hubso in gooyntu aanay aad u qoyanayn aagga kaydinta. Tani waxay u keeni kartaa gooynta nasashada, oo sidaas awgeed, iyaga ka dhig mid aan ku habooneyn in wax la baro. Jidhka la'aanta ayaa ka khatarsan inta badan.
Haddii gooyn la qalajiyey inta lagu guda jiro kaydinta, waa in lagu qooyay biyo iyo saddex maalmood oo ah meel qabow. Laakiin ka hor inta aanad engegin, hubi inaad cusbooneysiiso maraqa.
Ma taqaanaa? Si guntooda si deg deg ah oo fiican u degaan, cusbooneysii qaybaha hoose maalin kahor tallaalka ka dibna ku dhaji biyo qabow meel qabow.
Haatan aan aragno sida loo bilaabo rootida jirid. Marka hore waxaad u baahan tahay in la gooyo gooyn cagaaran si qoto dheer ah 3 cm si caleen ugu hooseeya ee seedling waa ka sarreeya dhulka. Masaafada u dhexeysa gooynta iyo inta u dhaxaysa safafka, isku day in aad ku hayso 5 cm. Dabool geedo leh foorno. Xuddunta oo aad ku fidi doonto filimka, ka samee xargaha. Heerkulka ka yar filimku waa inuu noqdaa 25-30 ° C. Gooyn 2-3aad maalintii.
In si fudud loo beeray tubta, rootiyada adventitious waxaa la aasaasay maalinta 12-aad iyo 18-aad, iyo in kuwa xidid si tartiib ah, bil ah. Marka xididada oo kaliya ay muuqdaan, kor u qaad filimka waqtiga maalintii si aad u hesho oksijiin badan aqalka dhirta lagu koriyo. Hal bil ka dib, quudiyo gooyn la Bacriminta macdanta, ka dibna ku shub si aad u badan.
Si geedo u adkaysatay jiilaalka, dhexe ee dayrta, ku rusheeyaa sariiraha lakabka ah ee peat ama caleemo qalalan.
Noocyada soo socda ee plomme ku dhalin si fiican u goynta cagaaran: Tula madow, Xasuusta Timiryazev, Casaankii hore iyo Ruwaayadda Moscow.
Gooynta lignified waa in la beeray si ay kelyaha saddexaad uu ku yaal dhulka hoostiisa, laakiin sida ugu dhow ee suurtagal ah dusha. Rootiyada waxaa laga sameeyaa cutubka saldhigga iyo wejiga. Iyo kuwa soo muuqday on asliga ah ee gooyn, si tartiib tartiib ah u dhintaan. Sidaa darteed, nidaamka xididka of tubta cusub waxaa laga sameeyey xididada asaasiga ah ee ku yaal saldhiga geedo. Si ay xididada asalka ah u koraan si dhakhso ah, waxaad u baahan tahay inaad habka gooynta gooynta leh hagaajiyaha koritaanka iyo iyaga siiso socodka wanaagsan ee hawada. Habka ugu wanaagsan ee koritaanka waa 5 cm ee ugu horeysa ee ciidda.
Si ay jiridu u wanaagsanaadaan, si aanay u xanuunsan oo aanay qalalan, dhererkoodu waa inuu yahay ugu yaraan 15 cm.
Beeridda geedo yar yar
Boodo in ay ka kooban tahay ciidda ma dalban iyo si fiican u kora on ciidda kasta. Kaliya qoyaanka fadhiya waa waxyeello, markaa ha ku beerin geed aad u dhow biyaha dhulka. Markaasaa tubta waa in aysan ku koraan hooska. Halka miraha ay sii xumaanayaan, caleemuhuna waxay iftiiminayaan qorraxda.
Haddii aad iibsatay safootada xilliga dayrta, markaa waxaad u baahan tahay prikopat iyo dabooli laamood burbadeed, ka dibna barafka. Guga, digo geedo ka hor beerto iyo iyaga ku beeri sida ugu dhakhsaha badan ee burooyinkeeda bilaabaan inay bararaan. Haddii aad ka maqnayd waqtigan, dhirta ayaa si xun u dhici doona. Meesha ay tubaakadu ku koraan waa inay noqotaa qorrax iyo hawo la'aan. Masaafada u dhaxaysa geedo iyo safafka u dhaxeeya 3 m. Qufac loogu talagalay geedo waxaa la diyaariyaa xilliga dayrta ama qoday guga, laba toddobaad ka hor intaan la beeri. Qoto dheer ee godka waa inuu ahaadaa nus mitir, iyo dhexroorka - 70 cm Xarafka fossa wuxuu xoojiyaa xajka, agagaarka kaas oo kala firdhaan isku dar ah beeritaanka. Si aan u dhaawacin jilifka, qoortiisu waa inay ahaato dherer ah 5 cm heerkulka dhulka. Faafi xididdada seedling ee fossa iyo dabooli lakabka ciidda adigoon ku darin bacriminta. Geedka abuurka waa in laga xoojiyaa dhinaca woqooyiga ee salka ah xagasha 90 ° dhulka. Ka dib markii laga beerto, ku shub geedka dhaadheer (4 baaldiyaal ah oo sapo ah), ku qoslaan humus, carrada qalalan ama peat.
Isku darka beeraha:
Horumarinta tubaako laga soo jarayo waa mid ka mid ah habka ugu fiican ee loo shaqeyn karo (haddii la sameeyo si sax ah) si ay u koraan geed geedo caafimaad leh.
Sida loo dhajiyo tubaakada adigoo ku dhejinaya
Habkani sidoo kale wuxuu khuseeyaa fidinta daaqsinka. Waxay leedahay faa'iidooyinkeeda marka la barbardhigo dhalmo by gooyn. Tusaale ahaan, xakamaynta joogtada ah ee xaaladaha dibadda looma baahna ilaa geedka uu qaato xidid. Iyada oo laga caawinayo lakabyada taranta, waxaad badbaadin kartaa noocyo jecel.
Wixii guntooda, waxaa lagama maarmaan ah in la doorto caleemaha saxda ah iyo abuuro xaalado loogu talagalay formation of xididada.
Waqtiga ugu fiican ee la jiido
Waqtiga ugu wanaagsan ee lagu abuuro lakab waa guga, waana in lagu beeray xididada la sameeyay xilliga deyrta.
On biqil, at height ah 15-20 cm ka soo top, ka saar dareenka jilif ah ama googooyaa oo qoryo. Ka dibna qaado laba cantoobe oo ah sphagnum qoyan oo ka samee buro iyaga ka mid ah. Ku adkee meeshii aad ka gooyay oo ku duudduubtay bacalka madow. Haddii cimiladu diiranto, xididdada ayaa si dhakhso ah u muuqan doona. Laanta leh xididdada la sameeyay waa in laga gooyaa dhirta hooyada, oo ay weheliyaan substrate, oo waxay degeen meel joogto ah.
Ma taqaanaa? Habka loo faafiyo by layering waxaa lagu yaqaan in China 4000 sano ka hor.
Guga, waxaad u baahan tahay in aad caleemaha sannadkii la soo dhaafay ee gooyn ah, iyo bisha August waxaad isticmaali kartaa caleemaha semi-xaabada ah ee sanadkan. Haddii aad go'aansatid in ay ku tarmaan plomme dhamaadka xagaaga, ka dibna fogaan ah 15-30 cm ka soo top of asliga ah, ka saar caleemaha iyo samee dhammaan hababka isku mid ah. Si aad u sameysid xidido, waxaad u baahan doontaa inaad sugto xilliga xiga.
Noocyada dhalmada ee caleemaha root caleemaha
Habka ugu fudud ee la soo saaro tubta - caleemaha xididka. Si aad u korto daboolka ka baxsan koritaanka, waxaad u baahan tahay inaad ogaatid xeerar yar. Lama oggola beeritaanka waa sprouts kudhow meel u dhow dhirta hooyada. Xulo kuwa ka fog. Si ay sapling si ay u qaataan xidid aan dhibaato lahayn, waxaad u baahan tahay inaad fuliso habka diyaarinta. Haddii dhammaan hababka si sax ah loo sameeyo, ka dibna waxaa suurtogal ah in lagu raaxeysto miraha delicious ee sanad, ugu badnaan laba.
Goorta la dacaayado caleemaha xididada tubta
Xilliga dayrta, waxa la jarjiraa xididada xiraysa geed hooyada ilaa geedo, iyo gu'ga ka qodo caleemaha leh xididdada iyo ku beeraan meel cusub. Xulashada labaad: fulin hawsha oo dhan bilaha August-September ama horraanta gu'ga, ka hor inta aan ubaxyada ubaxu.
Sida loo saaro scion
Ka qodo dhulka ka soo baxa hooyada oo raadso asalka aasaasiga ah. Isticmaal fiiqan fiiqan si aad uhesho xididada dhinaca kale ee geedka uterine ah. Labo toddobaad ka dib, ka saar ilxidhka isla markiiba u wareeji si wanaagsan.
Waa muhiim! Xiddigga ugu weyn, kaas oo aad kala soocatay seedling, waxay u baahan tahay in lagu dhajiyo garoonka beerta ama rusheeyeen dambas si aysan u qaadin cudurka.
Habka loo beero geedka dhalinyarada
Guga ee sanadka soo socda, seedling tubta si fiican u qaabaysan ayaa lagu beddeli karaa meel joogto ah. Warshadu waxay ku guuleysan doontaa xidid si guul leh haddii aad ka qodo dhinacyada oo dhan iyo ku bedelida adoo leh dhoobo dhulka ah. U hubso inaad tixgeliso dhamaan sifooyinka qadiimka ah ee koritaanka ee seedling: dhibcaha wadnaha, qorraxda, hooska.
Fossa soo degitaanka waa in ay ahaato cabbirkan oo ah in xididdada seedling ay si fiican ugu fariisan karaan. U hubso inaad ku rushayso ciidda bacrin ah iyo bacriminta godka. Ram carrada ku wareegsan seedling iyo ku shub.